Rose of Sharon: မေ့သမီးလေးဆယ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ
Posted by rose of sharon at 7:04 AM
Anonymous December 18, 2011 at 7:31 AM
Happy birthday သမီးလေး
ဝေ December 18, 2011 at 7:31 AM
မရပ်မနား စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစ်စင်းကို တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ..
ဘေဘီ December 18, 2011 at 7:32 AM
ချစ်စရာ သမီးလေး ၁၀နှစ်ပြည့်မှသည်
သမီးမေမေ ဆုတောင်း ဆယ်ချက်လည်း
tg.nwai December 18, 2011 at 7:37 AM
Happy Birthday ပါ သမီးလေးရေ...လိမ်မာရေးခြားရှိပြီး ထက်မြက်သွက်လက်တဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့သမီးကို သိပ်ချစ်ကြတဲ့ မိသားစု သူငယ်ချင်း ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ အတူတူပျော်ရွှင်ရင်း သမီးမေမေဆုတောင်းတဲ့အတိုင်း သိပ်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ဆုတွနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလေ...
:( December 18, 2011 at 8:00 AM
သမီးလေး အတွက် ရေးတဲ့စာမှာ မေတ္တာရေတံခွန်ကြီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးဆင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီး.... မျက်ရည်လည်မိတယ် သူငယ်ချင်းရယ်.... အမေခြင်းခြင်း အတိအကျကို နားလည်မြင်တွေ့လိုက်တယ်.... အရမ်းချစ်ကျတဲ့မေမေနဲ့ သမီး လေးရဲ့ မေတ္တာ အဟုန်ကြောင့် ဖောတို့ရဲ့ ကမ္ဘာလေး ပန်းများစွာဖူးပွင့်သာယာပါစေ.... ဟတ်ပီးဘသ်ဒေး ပါချစ်သမီးလေး....
( မနေ့ကပဲ စဉ်းစားမိနေသေးတယ်... သမီးနဲ့ သားရဲ့ မွေးစကပုံလေးတွေ မမြင်ဘူးလို့ တောင်းကြည့်ချင်နေတာ.... ကျေးဇူးသူငယ်ချင်းးး )
mstint December 18, 2011 at 9:06 AM
ကြည်နူးစွာနဲ့ဖတ်သွားတယ် Rose ရေ။
သမီးလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးမှာ နွေးထွေးတဲ့
Junemoe December 18, 2011 at 10:33 AM
အမ သမီးလေးက အချောလေးပဲ .. ဘိုမ လေးနဲ့ တူတယ်..:)
Happy Birthday ပါ မီးမီးရေ...
မာမီ့တူလို့နေမှာ မီးမီး ကသိပ်ချော... :D
tha mee lay is very cute and pretty....I am thinking when you were young, do you look like her?
You may be very beautiful and popular among the people.....
အိမ့်ချမ်းမြေ့ December 18, 2011 at 12:13 PM
Nge Naing December 18, 2011 at 1:38 PM
Happy Birthday ပါသမီးလေး။ မိဘကျေးဇူး သိတတ်ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သမီးလေး ဖြစ်ပါစေ။
Shinlay December 18, 2011 at 3:20 PM
happy birthday Thamielay
Rose...great respect to your Mitta ( မေတ္တာ)!!!
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 18, 2011 at 3:20 PM
Happy Birthday ပါ သမီးလေးရေ.... မေတ္တာတွေ ထုံမွမ်းနေတဲ့ မိဘ အရိပ်အောက်မှာ ထာဝရ အေးချမ်းစွာ ပျော်ရွင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း....
kiki December 18, 2011 at 6:36 PM
မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာများစွာကို တွေ့ လိုက် မြင်လိုက်ရလို့ ကိုယ့်မိဘနှစ်ပါးကိုယ့်အပေါ် ရှိခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို ပြန်ဆင်ချင်မိသွားတယ်.. ဖေါဖေါ ရေ.. သမီးလေး ၊ သားလေး တို့ နဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်စုလေး ထာဝစဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
Happy Birthday ပါ..သမီးလေး ရေ ..
rose December 18, 2011 at 6:41 PM
ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါ အစ်မရှာရွန်၏ သမီးကြီးလေး။ သမီးလေး မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်စွာသော မိသားစုနှင့် အစဉ် ထာဝရ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
မယ်ကိုး December 18, 2011 at 8:00 PM
Happy Happy Birthday ! sweetie :)
ခင်မင်းဇော် December 18, 2011 at 8:15 PM
ညီမဖောရေးတာ ဖတ်ပြီး အမက မျက်ရည်ကျလို့... မိခင်မေတ္တာ ပေါ်လွင်လိုက်တာ ။ သမီးလေးလဲ ပေးတဲ့ဆုတွေပြည့်ပါစေ။ ပျော်ရွှင်ဘွယ် ဘ၀ကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ညီရဲ December 18, 2011 at 9:38 PM
အစ်မ သမီးလေးက ချစ်စရာလေးနော်...
မိခင် တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်သွားပါတယ် အစ်မ...
သမီးလေးမှာ ဒီလိုမျိုး မေတ္တာတရားတွေနဲ့မိခင်တစ်ယောက်ရှိနေမှတော့ သမီးလေး ရုပ်အဆင်းရော၊ စိတ်အဆင်းပါ လှနိုင်ပြီပေါ့ သမီးရယ်။
စာရေးကောင်းတယ်နော်။ အမြဲလာဖတ်ပါတယ်။ ခုမှ မန့်ဖြစ်တယ်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 18, 2011 at 10:12 PM
မွေးနေ့မှာ သမီးလေးေ၇ာ တစ်မိသားစုလုံး ပျော်၇ွှင်ပါစေ ...
အနော် December 18, 2011 at 11:18 PM
မမရေ ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိခင်မေတ္တာကို အပြည့်အဝ မြင်လိုက်ရတယ်.. မျက်ရည်တောင် ဝဲတယ်.. ညီမလေးကိုလဲ ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါနော်..
Happy Birthday Thamae lay
Anonymous December 19, 2011 at 5:55 AM
အဝေးတနေရာကအန်တီအိုင်အိုရာက သမီးလေးကသိပ်ချစ်စရာကောင်းပြီး မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆုိုတဲ့ဆုနဲ့ အတိပြည့်စုံပါတယ်လို့ ။ သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာဒီစာလေးတွေလည်းအမှတ်တရရှိနေစေချင်ပါတယ်လို့ ။ သမီးမေမေတောင်းတဲ့ဆုတွေ အပြင်သမီးလိုချင်တဲ့ဆုတွေလည်းပြည့်ပါစေလို့ ။
နောက်ဆုံး..သမီးမေမေလည်းကျန်းမာချမ်းသာပြီး စိတ်သွားတုိုင်းကိုယ်ပါပါစေလို့ ။
မမနော်ရဲ့ချစ်ချင်းတွေအပြည့်နဲ့ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပီး မျက်ရည်တောင်လည်တယ် စာဖတ်ရင်းနဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့အချစ်တွေ မေတ္တာတွေကိုအပြည့်အ၀ တွေ့ လိုက်ရတာ သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲ
သမီးလေး ဆယ်နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်တရာတိုင် မိဘမောင်နှမစုံ၂လင်၂နဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ တဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေ မိဘအပေါ်သိတတ်နားလည်တဲ့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေ ဒိထက်မက ပိုပီးချောလှပါစေ
jasmine(တောင်ကြီး) December 19, 2011 at 12:45 PM
Happy Birthday ပါ သမီးလေးရေ
သမီးလေးက ကြီးလေ ချောလာလေလေပဲနော်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 19, 2011 at 2:36 PM
ပိုစ့်ထဲမှာ မေတ္တာရေစီးသံလေး တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတာကို ကြားလိုက်ရလို့ ကြည်နူးပီတိဖြစ်စွာနဲ့ ဖတ်နေမိပါတယ်.
သမီးလေး ၁၀နှစ်ပြည့်မှာ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ
လိမ္မာသိတတ် မွန်မြတ်သော သမီးကောင်းရတနာ ပညာတတ်လေးအဖြစ် မိဘတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ရွှင်လန်းစေနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ်နော်။.
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး အမေ့ကိုသတိရလိုက်တာ အမေကလည်း သားသမီးတွေအကြောင်းကို ခုလို စာလေးတွေ ရေးတတ်တယ်. အမေ့ကို သတိရတယ်
မြသွေးနီ December 19, 2011 at 5:21 PM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးချောလေးရဲ့ မေမေ ရင်ဘတ်နဲ့ရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တွေတောင် အိုင်ထွန်းလာမိတယ်..။ မိဘမေတ္တာဆိုတာမျိုးက ဆွဲငင်အားတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိတယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လောက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ စာဖတ်သူတွေကို သမီးလေးနဲ့ မေမေရဲ့ မေမေက ပြောပြလိုက်တာပါ။
blackroze December 20, 2011 at 1:48 AM
happy birthday ပါလို့..ပြောပေးပါနော်..
ဟန်ကြည် December 20, 2011 at 8:38 AM
မနှင်းဆီရဲ့သမီးလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ...ပြုံးတဲ့ အပြုံးကအစ ရိုးသားဖြူစင်ပြီး ကြည်လင်နေတာပဲ...ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးပါစေ မနှင်းဆီရေ...
မီယာ December 22, 2011 at 12:38 PM
အမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ငိုတောင် ငိုချင်လာတယ် happy birthday သမီးလေး
Happy Birthday ပါသမီးလေး...
မိသားစုတွေ မခွဲမခွာနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းသွားပါတယ်။
သမီးလေးကို ချစ်လို့ ပုံတွေကို အမြဲလာကြည့်ပါတယ်။ အခုလည်း သတိရလို့စာလာဖတ်ရင်း ပုံလေးတွေလာကြည့်သွားပါတယ်။
Nyi Linn Thit December 26, 2011 at 6:45 PM
အလုပ်တွေ များနေလို့ အခုမှပဲ ရောက်လာရတော့တယ်ဗျာ...၊
ငယ်တုန်းက ချစ်စရာကောင်းပြီး ကြီးတော့ ချောလာတဲ့ သမီးလေး.. ဘုရားရှေ့၊ လူရှေ့မှာ အစဉ်အတိုင်းကြီးပြီး၊ ဥာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမီးလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။
san htun December 31, 2011 at 10:01 AM
Happy Birthday Belated သမီးလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်..ဒီလို သမီးလေးရတာ အမအတွက် ကံကောင်းသလို သမီးလေးလည်း အမလိုအမေရတာ ကံကောင်းပါတယ်..ပို့ စ်လေးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ထုံမွှန်းနေတယ်..
It is so touching. Love it.